warkii.com » Meel ku qoro taariikhda la daawanaayo goos gooska Superstar Vijay Filimkiisa Master!!
Kooxo hubeysan oo dil ka geystay magaalada Muqdisho
Meel ku qoro taariikhda la daawanaayo goos gooska Superstar Vijay Filimkiisa Master!!
Master waa mid kamid ah aflaamta sanadkaan qeybihiisa hore sida weyn loo wada sugaayey balse nasiih xumo Covid-19 oo dunida ku faafay aawgii dib udhac ayaa ku yimid haderna waxaa la qorsheynayaa qeybaha dambe sanadka in la daawado.
Mashruucan waxaa hogaamiye ka ah Thalapathy Vijay waxaana doorar weyn kuleh xidigaha kala ah Vijay Sethupathi, Arjun Das, Shantanu,Malavika Mohanan iyo kuwa kale waana filim dagaal iyo xifaaltan weyn dhexmari doono labo Vijay inaba caadi ma ahan.
Kooxda Filimkaan ayaa qorsheynayaan in Filimkooda tiyaatarada saaran todobaadka feestada Diwali oo ku beegan 14-November waa hadii xaalada Corona degto sido kalena xal fiican la helo marka hadii mashruucan 14 Nov la daawanayo waxay qorsheynayaan xiliga goos gooskiisa dhameestiran la daawan lahaa.
Waxaa la sheegay 25-October in lasoo bandhigi doono goos gooska dhameestiran ee filimka Master kadibna 14 Nov ayaa la daawana filimka oodhan hadiise Corona xaalkiisa sii darnaado markaas dib udhac kale ayaa dhici doono oo kooxda qorshohooda labaad markaas 2021 ayee ka dhigi doonaan.
Maxay ka wada-hadleen Khayre iyo Qoor Qoor?September 22, 2020
Kooxo hubeysan oo dil ka geystay magaalada MuqdishoSeptember 22, 2020